Mykita Mylon, Basky Ihe Nkiri - Imewe Mmewe
Ihe Nkiri Ihe ndi MYKITA MYLON bụ nke ihe eji agba polyamide dị mfe na-egosi nhazi pụrụ iche. Emepụtara ngwa a pụrụ iche site na larịị maka usoro Nhọrọ Laser Sintering (SLS). Site na ịkọwugharị ihe ngosi ọdịnala na oval-round panto spectacle nke mere ejiji na 1930s, ihe osise BASKY na-agbakwunye ihu ọhụrụ na nchịkọta ihe nkiri a nke e bubere maka egwuregwu.
Aha oru ngo : Mykita Mylon, Basky, Aha ndị na-emepụta ya : Mykita Gmbh, Aha onye ahịa : MYKITA GmbH.
Ihe Nkiri Mykita Gmbh Mykita Mylon, Basky